Terms & Conditions - Society Society
Mampiasa ny tranonkalanay
Azafady vakiana amim-pitandremana ireo fepetra sy fepetra ireo rehefa mifehy ny fampiasanao an'ity tranonkala ity. Ny fampiasanao an'ity tranonkala ity dia ny fanekena ireo fepetra sy fepetra ireo, izay hanan-kery amin'ny daty fitsidihana voalohany anao. Raha toa ka tsy fenoina ireo fepetra sy fepetra ireo, dia fenoy ny fampiasana ity tranokala ity avy hatrany. Manaiky ny hampiasa ity tranonkala ity fotsiny ianao noho ny antony ara-dalàna, ary amin'ny fomba izay tsy manohintohina ny zon'ireo antoko fahatelo, na maneritery na manakana ny fampiasana sy ny fahafinaretany amin'ity tranonkala ity.
Ity tranonkala ity sy ny fampahalalana azy dia omena amin'ny 'tahaka ny' fototra izay tsy misy fiantohana na inona na inona na inona na inona, na tenenina na tsia. Ny fampiasana an'ity tranonkala ity sy ny fampahalalana momba izany dia tanteraka tanteraka amin'ny loza mety hitranga amin'ny mpampiasa. Na inona na inona tsy hitranga, ny Society Society dia ho tompon'andraikitra amin'ny fahavoazana rehetra mety hitranga na mifandray amin'ity tranonkala ity. Ny fanafody tokana sy manokana ho an'ny tsy fahafaham-po amin'ny tranonkala sy / na fanazavana voarakitra ao is hampitsaharana ny fampiasana ny tranokala sy ny vaovao.
Ny Society Society dia tsy manome antoka fa ny asa fonosin'ity tranonkala ity dia tsy hisy fifandonana na error free, na hanitsiana ireo fahadisoana ireo.
Fiarovana virtoaly, hacking sy fanitsakitsahana hafa
Manao ezaka rehetra isika mba hanamarinana sy hizaha ny fitaovana amin'ny dingana rehetra amin'ny famokarana, na izany aza Tsy maintsy maka fepetra manokana ianao mba hahazoana antoka fa ny dingana izay ampiasainao amin'ny fidirana amin'ity tranonkala ity dia tsy mampiseho anao amin'ny loza ateraky ny viriosy, code ordinatera maloto na endrika hafa fanesorana izay mety manimba ny rafitra solosainao manokana.
Tsy afaka mandray andraikitra amin'ny fahaverezana, fanakorontanana na fanimbana ny angon-drakitrao na ny rafitry ny ordinateranao izay mety hitranga amin'ny fampiasana fitaovana azo avy amin'ity tranokala ity. Tsy tokony hampiasa ny tranonkala amin'ny fampidirana amin'ny fomba mampiahiahy viriosy, trojan, kankana, baomba lojika ianao. fitaovana hafa izay manimba na manimba ny teknolojia. Tsy tokony hanandrana hahazo fidiram-bola tsy nahazoan-dalana amin'ny tranokalantsika isika, ny tranonkala izay itahiranan ny tranokalantsika na server, ordinatera na database mifandraika amin'ny tranokalantsika. Tsy tokony hanafika ny tranokalanay ianao amin'ny alàlan'ny fanafihana an-dalam-pandrosoana na ny famelezana ny fanararaotam-panafahana.
Amin'ny fanitsakitsahana ity fepetra ity, dia hanao heloka bevava ianao ao amin'ny Lalàna Computer Misuse 1990. Hilaza tatitra toy izany amin'ny tompon'andraikitry ny fampiharana ny lalàna izahay ary hiara-miasa amin'ireo manampahefana ireo amin'ny famoahana ny maha izy azy azy ireo.
Fampahalalana momba anao
Tsy handalo velively amin'ny antsipiriany omena antsika amin'ny olon-kafa isika fa tsy ireo izay voalaza ao amin'ny politikantsika manokana.
Fahalalana ny vaovao
Na dia ezahana ezaka rehetra aza ny ezaka natao mba hahazoana antoka ny fahamarinan'ny votoatiny, tsy misy andraikitra azo alaina amin'ny fahadisoana na fanadinoana rehetra.
Na dia miezaka mafy aza izahay mba hitazonana ny tranokalan'ny Elector d'Orient, dia tsy manome antoka na fepetra na fiantohana izahay momba ny fahamarinan'ny vaovao ao amin'ilay tranonkala. Tsy manaiky ny hetra na ny fahavoazana nateraky ny mpiseraseran'ny vohikala isika, na mivantana na tsy mivantana, na voatery noho ny fanolanana, fanitsakitsahana ny fifanarahana na raha tsy izany.
Anisan'izany ny fahaverezan'ny fidiram-bola na ny fidiram-bola, ny fandraharahana, ny tombom-barotra na ny fifanarahana, ny vola tahiry, ny angona, ny tsara sitrapo, ny fananana azo tsapain-tanana na ny fitantanana na ny fotoana fandefasana amin'ny tranokala na ny fampiasana, ny tsy fahafahana mampiasa, fampiasana ny tranokalanay, tranonkala mifandraika aminy ary fitaovana rehetra navoaka tao. Ity fepetra ity dia tsy hanakana ny filazana ny fahaverezan'ny fahavoazana na ny fahavoazana amin'ny fananana azo tsapain-tanana na ny fitarainana hafa momba ny fahaverezana ara-bola mivantana tsy voasokajy amin'ny sokajy voalaza etsy ambony.
Tsy misy fiantraikany amin'ny andraikitsika ny fahafatesana na ny fanimbana ataon'ny tena avy amin'ny tsy fahamendrehantsika, na ny andraikitsika noho ny fanendrikendrehana ny hosoka na ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona, ​​na ny andraikitra hafa izay tsy azo esorina na voafetra amin'ny lalàna manan-kery.
Misaotra sy mamporisika tranonkala hafa hampifandraisina amin'ny fampahalalam-baovao izay atolotra amin'ireo pejy ireo, ary tsy mila mangataka fahazoan-dàlana hifandray amin'ny elementsociety.co.uk
Na izany aza, tsy manome alalana anao izahay hanolotra fa ny tranokalanao dia mifandray amin'ny, na ekena amin'ny Elector Society.
Ny Society Society dia tsy manaiky ho tompon'andraikitra over ny votoatin'ny tranonkala fahatelo. Ny fisian'ireo rohy ireo dia tsy manamarina ny tranonkala, na ny fomba fitenenana azy ireo. Ny fampifandraisanao amin'ireo tranonkala ireo dia mety amin'ny loza mety hitranga aminao.
Fanitsiana ireo teny ireo
Ny Society Society dia afaka mamerina mamolavola ireo fepetra sy fepetra ireo amin'ny fotoana rehetra, ary manaiky ny handinihana matetika azy ireo ianao. Raha toa ka tsy azo ekena ny fanavaozana anao, dia manaiky ianao fa tsy hiditra haingana amin'ity fidirana ity.
Fizakàm-bahoaka, mari-tsoratra ary zo ara-tsaina
Tsy misy ampahany amin'ity tranonkala ity, anisan'izany ny fampahalalam-baovao, sary, logos, sary, ary ny endriky ny tranonkala, dia azo adika, naverina, nandefa na naverina tamin'ny endriny na inona na inona raha tsy nahazo alalana voasoratra alohan'ny zon'ny mpamorona afa-tsy ny an'ny tenanao manokana, na fampiasana ara-barotra.
Ireo fepetra sy fepetra ireo dia hifehezan'ny lalàn'i Angletera sy Pays de Galles. Ny fitsarana ao Angletera sy Pays de Galles dia hanana fahefana eo anatrehan'ny adihevitra mety hitranga.
Raha toa ka misy ny fepetra sy fepetra rehetra apetraka ho tsy ara-dalàna, tsy manan-kery na tsy azo lavina, noho ny fanjakana na firenena rehetra izay itakiana ireo fehezan-dalàna ireo mba hahomby, dia ho toy ny tsy ara-dalàna, tsy manan-kery na tsy azo trandrahana izany fepetra izany , dia hofaritana sy hanaisotra azy ireo avy amin'ireo fepetra ireo ary ny fe-potoana sisa tavela dia ho tafavoaka velona, ​​hijanona amin'ny heriny manontolo ary hamindra sy hanohy ny fatorana sy ny fampiharana azy.